Isimo sisenguginqigonqo – Msunduzi News
UMONGO womzabalazo wabantu baseNingizimu Afrika wabe umayelana nokubuyiswa kwesithunzi sabacindezelwa. Olunye udaba oluthinta ukuvikelwa kwesithunzi wudaba oluthinta izindlu nokungenye yezinto eziyinselelo kuhulumeni.
NgokweSheduli 4A yoMthethosisekelo, ukuhlinzeka ngezindlu kuwukubambisana phakathi kukaHulumeni kazwelonke nowesifundazwe. Nokho, omasipala baneqhaza abalibambayo ekulekeleleni. Odabeni lukaGrootboom, iNkantolo YoMthethosisekelo yathi ukuhlinzeka izindlu akusikhona ukumisa izindonga kuphela: kubandakanya izinsizakalo ezifanele nokuthuthwa kwendle. Lezi zinsizakalo ziqondene ngqo noHulumeni Bendawo. INkantolo yabuye yagcizelela ukuthi yonke iminxa kaHulumeni inomthwalo wokuba yenze okuthile ohlelweni lokuhlinzeka ngezindlu.
NgokwamaSheduli, omasipala, kufanele bahlinzeke izinsizakalo (okubandakanya amanzi nokuthuthwa kwendle), okuqinisekisa ukuthakaselela ilungelo lokuhlinzekwa ngendlu.
UMasipala uMsunduzi njengeningi lomasipala kuleli ubhekene nenselelo yokuqinisekisa ukuthi abantu baba nophahla phezu kwamakhanda abo. Lokhu loMasipala ukwenza ulandela imithetho yezwe nekubeka kucace ukuthi okwawo wukulekelela kulokho osekuqalwe nguHulumeni wesifundazwe nokazwelonke.
Iphawula ngalokhu iMeya uNjilo ikwamukele ukuthi isidingo sezindlu sikhulu kakhulu eMsunduzi: “Okwethu akwehlukile kulokho okwenzeka kwabanye omasipala lapho kunesidingo khona sezindlu. Njengomasipala siyasamukela isibopho esinaso uma kuziwa ekutholeleni abantu izindlu. Sibuka ukuhlinzekwa ngokokufi hla ikhanda njengelungelo elinqala lenhlalo yingakho sisebenzisana nabathintekayo ngaphakathi nangaphandle kuHulumeni ukuqinisekisa ukuthi siyasigcina isibopho esinaso.”
UNjilo uveze ukukhathazeka kwakhe ngesimo athe siyishwa kanti futhi singaphezu kwamandla kaHulumeni.
“Iqiniso lithi uHulumeni wethu waqhamuka nenqubomgomo eyabe inezinhloso ezinhle. Ngeshwa isimo esibhekene naso kwezomnotho senza thina njengohulumeni sibukeke sindonda ekufezeni iphupho esinalo. Isimo sezimali kuHulumeni nasemhlabeni jikelele kwenye inkathi siphoqa ukuthi sithathele lapho sifisa ukwenza okuyikho. Phezu kwalokho ngeke siyeke ukuphokophela ekwenzeni okubafanele abantu bakithi nesiwutho ngabo,” kusho iMeya.
Khona lapho iMeya ibe isilumbanisa udaba lwezindlu kanye nolwabampofu. UNjilo uveze ukuthi uMsunduzi unayo inqubomgomo ebhekele abampofu nathe lokhu akusona nje isihe kepha kuwukulandela umthetho wezwe kanye nenqubomgomo kaHulumeni onakelelayo.
Umthethosisekelo uqinisekisa amalungelo enhlalo kuwo wonke umuntu ungakhethi. Onke amalungu omphakathi, ikakhulukazi abasweleyo, kufanele athole izinsizakalo. Odabeni lwaseGrootboom, iNkantolo igcizelele ukuthi uHulumeni kufanele unakelele labo abadinga kakhulu ukuze babe sesimweni esamukelekile ngokwenhlalo nempilo. UMthetho Wezinhlelo udinga ukuthi inqubomgomo yokulawula ingeniso nokuqoqwa kwezikweletu uhlinzeke abasweleyo nabakweletayo ngenqubomgomo kazwelonke kwabasweleyo.
Kulokhu uNjilo ukuqinisekisile ukuthi kukhona abakwenzayo ukuhlangabezana nabahlwempu eMsunduzi nagcizelele ukuthi nabo bangabantu.
“NjengoHulumeni onakekelayo eMsunduzi sinayo inqubomgomo ebhekelele abampofu. Siyafisa abantu baseMsunduzi bayazi le nqubomgomo ukuze labo abafanele bangasali ngaphandle,” kusho uNjilo.
Izinhloso zeNqubomgomo Yabampofu eMsunduzi yilezi:-
Ukuvala igebe phakathi kwezakhamuzi ezimpofu nalezo ezingaswele ezikuMasipala uMsunduzi ngokusebenzisa usizo oluqondiwe lokuhlinzeka ngogesi, amanzi nezinye izinsizakalo kwamahhala kuhambisana nokutholakala kwezinsizakalo zomphakathi ngokubanzi.
Ukwakha uhlaka lapho uMasipala unikeza khona usizo emakhaya abampofu ngokwama-akhawunti abo kaMasipala.
Ukuhlonza izindlela zokufaneleka kwamakhaya ampofu.
Ukuqinisekisa ukuthi lezo zindlela zisetshenziswa ngokuyikho nangobulungiswa kubo bonke abafake izicelo.
Ukuze ufaneleke ‘kwabafake Izicelo Zobuphofu’, ikhaya kufanele lihambisane nezindlelakuhlunga ezilandelayo:-
Isamba semali engenayo ekhaya kufanele ingeqi kuleyo evunywe uMkhandlu nokho ehlala iguquguquka.
Ofaka isicelo kufanele kube isakhamuzi saseNingizimu Afrika.
Ofaka isicelo akufanele abengumnikazi obhalisiwe kwenye indawo.
Ofaka isicelo kufanele abengohlala kuMasipala uMsunduzi futhi abe neakhawunti ebhalisiwe kuMasipala.
Ukubhalisa njengomnikazi we-akhawunti akudingekile emakhaya nasezindaweni zasemakhaya lapho kungahanjiswa khona ama-akhawunti.
Bazizwa beyingxenye yoMkhandlu ngamagalelo abo
Previous post: AmaKomiti: Inhliziyo eyelusa intuthuko
Next post: UMasipala nenqina yokulwisana namawuwa